Maitiro ekuisa yako iPhone 12 muDFU modhi uye mamwe maitiro anonakidza | IPhone nhau
Maitiro ekuisa yako iPhone 12 muDFU modhi uyezve mamwe materu anotonhorera
Yokutanga iPhone 12 Ivo vatove vanosvika kune vashandisi, zvisinei, ino ndiyo nguva yekutanga nema backups, kudzoreredza uye nhau padanho re software kuti kunyange hazvo zvisingawanzo kuitika muIOS, varipowo. Ndosaka zvakare zvakare isu tabva kuActualidad iPhone kuti tikupe ruoko.
Tinoda kukudzidzisa mamwe manomano eiyo nyowani yako iPhone 12, unogona kumisikidza DFU modhi uye Yekudzoreredza zviri nyore nemirairo iyi. Ramba kuenda kuhunyanzvi sevhisi uye uwane kuti iwe ungamutsiridze sei yako iPhone 12 pachako pasina kuwanda kwakawanda, iwe unongoda komputa nerubatsiro rwedu.
Panguva ino isu tafunga kuperekedza izvi Tutorial yevhidhiyo iyo inouya zvechokwadi inobatsira kuti zvinhu zvive nyore uye nekukurumidza sezvazvinogona. Ndosaka tichikurudzira kuti iwe utarise uye uone mashandiro anoita matanho akareruka atichataura nezvazvo pazasi, uye nenzira yaunogona kunyorera uye kutipa iyo Kufanana kutibatsira kuti tirambe tichikura chiteshi chedu, chakagadzirirwa kugara chichikubatsira .
1 Nzira dzakasiyana dzekudzima yako iPhone 12
2 Force restart iyo iPhone
3 Isa iPhone 12 muKudzorera Mode
4 Isa iPhone 12 muDFU Mode
Nzira dzakasiyana dzekudzima yako iPhone 12
Sezvisinganzwisisike sezvazvinogona kuratidzika, kunyanya kana iwe uchibva pachigadzirwa chine bhatani re «Kumba», kune vashandisi vanowana chinogumbura chikuru pavanodzima yavo iPhone. Ngatiti Apple hazviite kuti zvive nyore chaizvo kana. Ngatitangei nenzira inokurumidza, uye iko kusanganiswa kwemabhatani epanyama anotibvumidza kudzima yedu iPhone nekukurumidza sezvazvinogona.
Kune izvi iwe unofanirwa kungotevera rinotevera bhatani musanganiswa: Vhoriyamu +> Vhoriyamu -> Simba Bhatani. Paunenge iwe waita musanganiswa wemabhatani, chinotsvedza chinowoneka. Iye zvino isu tinongofambisa iyo yekutsvedza inotsvedza kubva kuruboshwe kuenda kurudyi uye foni inozodzima zviri nyore, ichidzora iyo skrini nhema.
Nekudaro, kunyangwe hazvo vazhinji vasingazvizive, isu tine imwe nzira inonakidza kudzima chishandiso chisingade chero bhatani repanyama uye chiri chinoshamisira muchikamu cheMisetingi che iPhone yedu. UyeIzvi zvinondirova sekufamba kusinganzwisisike kweApple, kunyanya kufunga kuti "yakapusa" chinhu kuita kuti iyo iPhone idzime nekudzvanya iyo Simba bhatani.
Iva sezvazvingaita, Kana iwe ukaenda kuZvirongwa> Zvakajairika uye pfugama kune zvekupedzisira sarudzo, iwe uchawana mukana wekudzima iyo iPhone pasina kubata bhatani banyama.
Force restart iyo iPhone
Iyo yekutangazve kunyangwe isiri iyo yakajairika, dzimwe nguva zvinodawo pa iPhone yako, nei tichizozviramba. Kana iwe urikutsvaga yakakwira bhatiri kunwiwa kupfuura zvakajairwa kana iko kunyorera kuri kuita zvisina kujairika kuita, kutanga patsva kunogara kuri sarudzo yakanaka.
iPhone 12 Pro: Iyo Inokosha Chaizvo Izvo? Unboxing uye yekutanga kuratidzwa
Muchokwadi, tinogona kutaura kuti hapana chakaipa nekutangazve chishandiso nguva nenguva kusimudzira mashandiro eruzhinji kubvira nenzira iyi isu tinosunungura RAM ndangariro uye kubvisa mamwe maitiro ekumashure angangokanganisa mashandiro eiyo iPhone.
Nekudaro, usanyanye kufunga nezvekutanga patsva, chishandise chete kana iwe uchiona zvichidikanwa, uye usagadzira reboot mapatani kana iwe ukatadza kuwana chikonzero chekuzviita, sezvo kugara uchibatidza mudziyo uye kudzima kunogona kukanganisa zvakaipa bhatiri.
Zvichakadaro isu tichakuudza kuti zviri nyore sei kumanikidza kutangazve iyo iPhone: Dhinda VOL +> Dzvanya VOL-> Dhinda iyo Simba bhatani uye ubatise kusvikira iyo skrini yashanduka nhema uye iyo Apple logo irioneke zvakare zvichiratidza kuti iPhone yave kuda kubatidza. Rangarira kuti kana iwe ukaita tsaona, kutangazve ndiyo inogara iri yekutanga sarudzo.
Isa iPhone 12 muKudzorera Mode
The Recovery Mode kana Recovery Mode Iyo sisitimu iyo Apple inoshanda kune iyo iPhone kuitira kana tiine matambudziko akakomba neiyo Inoshanda Sisitimu uye izvo zvichatibvumidza kuidzosera zviri nyore uye nekukurumidza pamwe nekudzorera backup kopi yayo.
Muchidimbu, ndiyo nzira yakanaka yekuti tibatanidze neMac yedu kana PC kana tiri kunetsekana nehunhu hwakakomba, sekukanganisa kusingakwanise kugadziriswa patakatoyedza sarudzo yedu yekutanga, sezvatareva. pamberi, inogara iri yekumanikidza iyo reboot
Kuisa yako iPhone muKudzorera Mode iri nyore kwazvo, iwe unofanirwa kuita zvinotevera:
Kutanga tinobatanidza yedu iPhone netambo kuMac kana PC kusvika yazviona
Dhinda Vhoriyamu -
Tinodzvanya bhatani reMagetsi ndokuibata kusvikira iyo iPhone yadzima uye masekondi gare gare tambo yekubatanidza logo inoonekwa uye izvo zvicharatidza kuti tazviita zvinobudirira.
Kubuda Kudzoreredza Mode Isu tinongofanirwa kudimbura tambo yeMheni kubva ku iPhone uye tinya bhatani reMagetsi kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa uye yotendeuka kazhinji.
Isa iPhone 12 muDFU Mode
DFU Maitiro Ndiyo sarudzo yedu yekupedzisira kudzoreredza kana kudzoreredza mudziyo patinenge tiine matambudziko akakomba neiyo Inoshanda Sisitimu kana nekuita kwayo. Imwe chete sarudzo kana tatanga DFU Mode ndeyekudzosera zvachose iOS.
Ndinokurudzira iwe kuti iwe utorere yazvino vhezheni yeIOS zvisati zvaitika inoenderana kubva kune imwe webhusaiti yakavimbika senge www.ipsw.me uye nekudaro chengetedza yakawandisa nguva sezvinobvira kana uchiisazve iyo Inoshanda Sisitimu, nekuti kushandisa chishandiso muDFU Mode kunogona kuomarara.
Aya ndiwo matanho aunofanirwa kutevedzera uye kutora chinyorwa chakanaka nekuti izvi zvinongokodzera kune vane hunyanzvi.
Regedza bhatani reMasimba uye ubatise Bhatani- bhatani kwemamwe masekondi gumi.
Zviri izvo "zviri nyore" iwe unogona kuisa chishandiso chako muDFU Mode. Uye kuti ubve mune iyi modhi, iwe unoziva, iwe unofanirwa kungodzvanya nekubata iyo Simba bhatani kusvikira apuro rioneke zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Maitiro ekuisa yako iPhone 12 muDFU modhi uyezve mamwe materu anotonhorera
Mavhidhiyo anopemberera kusvika kweiyo iPhone 12 uye anotendera iwe kuti utore mavhidhiyo muHDR
Aya ndiwo maratidziro anoita iyo iPhone 12 iyo yekucheka, iyo yakareruka uye iyo bendgate bvunzo